Radio Malmala Radio malmala जागीरको पहिलो आधार बायोडाटा Radio malmala
जागीरको पहिलो आधार बायोडाटा
स्नातक तहको अध्ययन पूरा गरी जागीरको खोजी गरिरहेकी पाटनका मञ्जु महर्जनलाई पत्रिकामा खोलिने भ्याकेन्सी एनाउन्समेण्टप्रति विश्वास नै छैन । आवश्यकता भन्दै लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर पत्रिका विज्ञापन गर्छन्, तर कहिले नि नबोलाउने गरेको उनको गुनासो छ । ‘कतिओटामा आवेदन हालिसकेँ, तर बोलाइएको छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘आफ्ना मान्छे भर्ती गर्न मात्र यस्ता भ्याकेन्सीको नाटक रचिएको हो ।’
‘२ वर्षदेखि जागीरका लागि भौंतारिरहेको छु । पढेर मात्र के गर्नु, आफ्नो मान्छे नभईकन कहीँ जागीर नपाइने रहेछ,’ महर्जनले भनिन्, ‘परीक्षा लिएर, मार्कसिट हेरेर, अन्तरवार्ता लिएर पो जागीर दिनुपर्छ । होइन र ? यहाँ त राम्राभन्दा हाम्रालाई छान्ने प्रवृत्ति छ ।’
वास्तवमा अधिकांश कम्पनी वा संस्थाले नातावाद, कृपावादअनुसार जागीर दिने गर्दैनन्,’ राष्ट्रिय छवि भएको एउटा कम्पनीका एक मानव संसाधन व्यवस्थापकले भने, ‘सानातिना व्यवसायमा यस्तो होला । तर हामी आवेदकको बायोडाटालाई पहिलो आधार मान्छौं ।’ पढाइको अब्बलपन दोस्रो प्राथमिकतामा राखिने जानकारी उनले दिए । ‘बोर्ड फष्र्ट भए पनि के गर्ने ? बायोडाटा नै बनाउन नजान्नेले कम्पनीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ला ?’ उनले प्रश्न गरे ।
वास्तवमा धेरैजसो कम्पनी वा संस्थाले अन्तरवार्तामा बोलाउनुभन्दा पहिले शर्टलिष्ट तयार गर्छन् । खासगरी आकर्षक कम्पनी तथा कार्यालयमा कामका लागि प्रशस्तै आवेदन प्राप्त हुने भएकाले आकर्षक बायोडाटाले मात्रै उनीहरूको ध्यान आकृष्ट गरेको पाइन्छ ।
सरकारी निकायमा जस्तो परीक्षा लिई अन्तरवार्ता गर्ने प्रावधान कम्पनीहरूमा हुँदैन । यसका लागि उनीहरूसँग समय पनि हुँदैन । त्यसैले पहिलो आधार नै बायोडाटा हुने गरेको हो ।
पहिलो दृष्टिमै रोजगारदाताको ध्यान खिच्न सक्ने बायोडाटा नै असल बायोडाटा हो । त्यस्तो बायोडाटाले मात्रै पूरै पढिने अवसर पाउँछ र अन्तरवार्तासम्म पुर्‍याउन सक्छ । अस्पष्ट, महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू माथिबाट तलतिरको क्रममा क्रम मिलाएर नलेखिएको बायोडाटाले वास्तविक योग्यता पनि प्रतिविम्बित गर्न सक्दैन । साथै, लेआउट, फण्ट, फण्ट साइज जस्ता आदिले पनि आकर्षक बायोडाटा लेखनमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्छन् ।
आफूलाई बायोडाटा बनाउनेमा अझै अन्योल छ भने गूगलको बायोडाटा फम्र्याट सर्च गर्न सकिन्छ । त्यहाँ आफूले वा रोजगारदाताले खोजेको फर्म्याट पाउन सकिन्छ । कम्पनी वा संस्थालाई कस्तो किसिमको फम्र्याट आवश्यक हुन्छ भन्ने सुझाव त्यहाँ भेटाउन सकिन्छ । फर्म्याट पाएपछि त्यसलाई आफूअनुकूल प्रयोग गर्नुपर्छ । कपी तथा पेष्ट गर्दा नतीजा नराम्रो पनि हुन सक्छ